Nhau - Kuziva kwekupatsanurwa kweflask, zvinoshandiswa, nzira yekushandisa uye zvinhu zvinoda kutarisirwa
Kuziva kwekupatsanurwa kweflask, kushandiswa, nzira yekushandisa uye zvinhu zvinoda kutarisirwa
Kuziva nezve kupatsanurwa kweflask, kushandiswa, nzira yekushandisa uye zvinhu zvinoda kutariswa
Poshi. chinzvimbo chinzvimbo
Inowanzoshandiswa chirongo chine denderedzwa repasi chinu, chakadzika chezasi chinu uye chinwiwa chinwiwa
Round pasi chinu
Round pasi chinu igirazi rinoonekera girazi rine idenderedzwa pasi. Iyo inowanzoshandiswa kupisa uye kugadzirisa mudziyo mune zvemakemikari kuyedza. Shandisa marasks emari yakawanda yemvura uye bvunzo machubhu emari shoma.
Flat pasi chinu
Flat yepasi pabhokisi nekuda kwepasi rakadzika, kana kudziya kuchizopiswa zvisina kuenzana, saka kazhinji hazvishandiswe senge yekudziya reactor, uye yakadzika tafura yepasi iri nyore kubata mudziyo unowanzoshandiswa kuita pasina kupisa.
Mudziyo wegirazi unoshandiswa kudirisa mvura kana kupatsanurwa. Iyo inowanzo shandiswa neyakagadziriswa pombi, mvura inogamuchira pombi uye mudziyo wekugamuchira mvura. Gesi jenareta inogona zvakare kuunganidzwa.
1. Liquid-solid reactor kana liquid-to-liquid reactor.
2. Unganidza gasi reaction jenareta (yakajairwa tembiricha, kudziyisa).
3. Durura kana kupatsanura zvinwiwa uchishandisa chinwiwa chinwiwa, rinova guchu rine pombi yebazi.
Vatatuiye misiyano mikuru
1. Vanoratidzika zvakasiyana
Round repasi chinu: mudziyo weutete girazi machubhu pasina zvishoma kuderera protrusion pamutsipa webhodhoro. Mutsipa webhodhoro ipombi yakatwasuka.
Flat yepasi pabhokisi: Musiyano uripo pakati penzvimbo yakatsetseka uye yakatenderera pabhasikiti ndeyekuti pasi rakatsetseka.
Distilling flask: mutete girazi chubhu inotambanudzira zvishoma ichidzika pamutsipa webhodhoro, yaishandiswa kukweva hutsi, sezvo zvichidikanwa pakuzadza zvinwiwa. Pamusoro peiyo distillation chinwiwi kupisa inoda kuvhara muromo webhodhoro, inofanira kunge iri imwe chubhu kunze
2. Kushandiswa kwakasiyana
Round iripasi chirongo: inogona kudziirwa kwenguva yakareba, asi inofanirwa kuvezwa neasbestos mesh. Chinu chakatenderedzwa-chakadzika chinogona kushandiswa kupisa yakawanda yemvura nenzira yakavharika, uye inogona zvakare kushandiswa kutsime kuyedza.
Distillation flask: Rutivi chubhu pamutsipa, rinoshandiswa zvakanyanya mumashandisirwo emidziyo.
Chinwiwa: Chirongo chinoshandiswa semvura yekuita mudziyo isingade kupisa nekuti inodzikamiswa paduratifomu yakatwasuka.
Chechina, Shandisa nzira
(1) Hunhu hwakajairika
1 Sinofanira kuiswa pamhepo yeasbestos kudziyisa, kuitira kuti ipiswe zvakaenzana; Kana uchipisa, rusvingo rwekunze rwechirongo runofanira kunge rusina madonhwe emvura.
2 Dende harigone kushandiswa kwenguva yakareba kupisa.
3 Kana isina kushatirwa, kana iro rakatsetseka-rakadzika guchu rinoshandiswa seyakagadziriswa mudziyo, hapana chikonzero chekuigadzirisa ine simbi furemu.
1. Kutenderera-pasi-pasi chinu
(1) Kukora kwepazasi kwerabhoramu repasi repasi yunifomu, uye hapana muganho, unogona kushandiswa kwenguva refu kupisa kwakasimba.
(2) Kana ichidziya, chinu chinofanira kuiswa pamambure easbestosi uye haigone kudziiswa zvakananga nemurazvo.
(3) Mushure mekupedzwa kwekuyedzwa, kana paine catheter, iyo catheter inotanga kubviswa kutanga kudzivirira kudzoka, uyezve iyo inopisa sosi inobviswa, uye mushure mekumira kutonhodza, mvura yemarara icharapwa nekugezwa.
(4) Kana chinwiwa chapiswa, asbestosi mambure inofanirwa kuvezwa, iyo isingafanire kupfuudza 1/2 yevhoriyamu reguchu (nekutya kuti yakawandisa mhinduro iri nyore kuputika painobika kana kumanikidzwa kuri mudengu iri yakanyanya kukwirira uye chinu chinoputika).
(1) kusvika padhi asbestosi mambure kana ichipisa, inogona zvakare kudziirwa neimwe yekugeza inopisa. Kana uchipisa, iro vhoriyamu vhoriyamu harifanirwe kupfuura 2/3 yeiyo vhoriyamu, kwete isingasviki 1/3 yeiyo vhoriyamu.
(2) Paunenge uchiisa zvishongedzo (zvakaita sema thermometer, nezvimwewo), mapuragi akakodzera erabha anofanirwa kusarudzwa, uye kutariswa kwakakosha kunofanirwa kubhadharwa kuti uone kana kusimba kwemhepo kwakanaka.
(3) zvakanakisa kuwedzera hushoma hwezeolite (kana yakaputswa porcelain) pazasi pebhodhoro pamberi apo distillation, kuitira kudzivirira kufashaira.
(4) kana kudziisa kuchiiswa pamambure easbestosi, kuti ipiswe zvakaenzana.
(5) Mushure mekudzikiswa, pisitoni inofanira kutanga yavharwa wozomisa kudziya kudzivirira kukweva.
(6) Chinzvimbo cheiyo mercury bhora re thermometer panguva yedhiringi inofanira kunge ichimhanya nemucheto wepazasi webazi pombi muromo wemudziyo wedhizaini.
Shanu, Nyaya dzinoda kutariswa
1. Jekiseni remvura haripfuure 2/3 yehuwandu hwayo uye isingasviki 1/3 yehuwandu hwayo.
2. Kana uchidziisa, shandisa asbestos mesh kupisa zvakafanana.
3. Distillation kana kupatsanurwa kunofanirwa kushandiswa nerubber plug, catheter, condenser, nezvimwe.
Huida ane makore mazhinji echiitiko mukugadzirwa uye kugadzirisa girazi reguchu nemaindasitiri emhando yepamusoro. Mutsara wechigadzirwa wakapfuma uye unokwanisa kusangana neruzhinji rwegirazi guchu rekuyedza kunyorera. Huya usarudze zvigadzirwa zvakanaka zvezvikumbiro zvako zvekuyedza.
Post nguva: Jun-07-2021